Imfundiso yeTotalitarian yamaQhawe ezoBulungisa kwezeNtlalo - Ezopolitiko
Eyona Ezopolitiko Imfundiso Yolawulo-mandla Lonke ‘Lamagorha Wezobulungisa Kwezentlalo’
Imfundiso Yolawulo-mandla Lonke ‘Lamagorha Wezobulungisa Kwezentlalo’
Uqhanqalazo kwiYunivesithi yaseMissouri lwanyanzela amagosa esikolo aliqela ukuba arhoxe ngenxa yezityholo zobuhlanga nocalucalulo, ubukhulu becala besekwe kwizityholo ezenziwe yinkokeli yabafundi uPeyton Head. (Ifoto: Michael B. Thomas / Getty Izithombe)
Intshukumo yanamhlanje yezobulungisa kwezentlalo, okanye ukuchaneka okutsha kwezopolitiko, yavela kwindawo ebonakalayo kulo nyaka uphelileyo. Uqhanqalazo lwabafundi luye lwagqitha kwiikhampasi kunye neemfuno ezihlala zijolise ekucoceni ubuqhetseba-kukhokelela kwiingxoxo ezishushu zokuba ngaba le ntshukumo iyinyani yokuqhubela phambili yempikiswano okanye ngumzamo wexesha elide ukuphumeza ubulungisa kubo bonke. Uphengululo lonyaka iqhekeza phakathi Inqaku lemihla ngemihla Ekupheleni kukaDisemba wabhengeza u-2015 unyaka wegorha lezobulungisa kwezentlalo.
Inkqubo ye- Dot yemihla ngemihla umbhali, umfundi ogqwesileyo kunye nomlobi wepolitiki uMichael Rosa, wayincoma le nto kwaye wabongoza abakhululekileyo ukuba balamkele eli xesha. Nangona kunjalo izinto azenzileyo azibongozileyo, njengoko isihlwele sobulungisa kwezentlalo sithanda ukuthi, siyingxaki. Umboniso wakhe A, ukumiselwa ngokusemthethweni komtshato wabantu besini esinye, eneneni bekungekho nto ingako inokwenziwa ngokuhamba kwezobulungisa kwezentlalo; kwaba sisiphumo seminyaka engamashumi amabini yokwahluka okwahlukileyo, ubugqwirha obunembono egxile kwinjongo ecacileyo-ilungelo elisemthethweni lokutshata- kunye noxinzelelo olulinganayo, hayi ukuba ungubani. Kwaye #BlackLivesMatter, ikwayintshukumo egxile kugonyamelo oluthile- ubundlobongela bamapolisa kubantu base-Afrika baseMelika- yenzakalisiwe, ayancedwa, yimfundiso yePC leyo ucinezela Ingxoxo ngemicimbi enameva enje ngolwaphulo-mthetho olumnyama-mnyama nokumnyama kunye nokuhlaselwa kwentetho engavisisaniyo (Amherst ababhikishi ibango amanyathelo oluleko ngakubo abafundi ababebeke zonke iipowusta zeMicimbi yoBomi bonke).
Uninzi lwamaMelika luxhasa ukulingana ngokwesini, bakholelwa ukuba abantu abadlulayo kufuneka baphile ngendlela abafuna ngayo, kwaye bayala intiyo yamaSilamsi. Kodwa amajoni ezobulungisa kwezentlalo ajike ezi zizathu zaba kukuzenzakalisa.
Ngelishwa, eminye imizekelo kaMnu Rosa yobulungisa bezentlalo ngokusebenza-ukuvuselelwa kwabafazi, ukubonakala okutsha kwemicimbi ye-transgender kunye nokuchasana ne-Islamophobia-zikwimimandla ethe tyaba kuloliwe. Ayisiyiyo into yokuba akukho nto iphosakeleyo ngemigaqo: Uninzi lwabantu baseMelika luxhasa ukulingana ngokwesini, bakholelwa ukuba abantu be-transgender kufanele ukuba baphile ngendlela abanqwenela ngayo kwaye bayala intiyo yamaSilamsi. Kodwa amajoni ezobulungisa kwezentlalo ajike ezi zizathu zaba kukuzenzakalisa. Ubufazi babo buyakhululeka amadoda ehleli nemilenze yabo bodwa kuhambo loluntu, ifuna ukungavisisani iindawo ezikhuselekileyo kwaye kukhala ingcinezelo kwinkxalabo malunga nobungozi kwezempilo. Ukuhanjiswa kwabo kwe-transgender kufuna intlonipho kulungelelwaniso olwenziwe ngokwezifiso isazisi nge izimelabizo zoqobo lonto ingatshintsha kwi-whim kwaye ubethelela umenzi wefilimu oqhubela phambili ngokuzinikela kwi-transphobic isiqhulo ocinga ukuba abalinganiswa ababhinqileyo ngabomama ababhinqileyo. Ukuchasana kwabo ne-Islamophobia trash abagxeki ababhinqileyo ye-Islamism egcinayo kunye ixhoba-ityala Iintatheli zabulawa ngokupapasha iikhathuni zikaMohammad.
Ngaba amagorha ezobulungisa kwezentlalo ka-2015 axhase izizathu ezifanelekileyo? Ngokuqinisekileyo. Kodwa uninzi lomnqweno wabo luya kwintetho nakwinkcubeko yamapolisa ejolise kulwaphulo-mthetho olungenaxhoba olwaphula imigaqo yabo yokuziphatha. Abaqhankqalazi baphikisana nomsitho weKimono ngoLwesithathu kwiMyuziyam yaseBoston yoBugcisa. (Ifoto: UJohn Blanding / iBoston Globe nge-Getty Izithombe)
Cinga ngonyaka ophelileyo uqhankqalazo ngokuchasene nomboniso weBoston Museum of Fine Arts ovumela iindwendwe ukuba zizame ikimono: Amatshantliziyo ahlasele oku njengolwabiwo lwenkcubeko kunye ne-impiriyalizim yobuhlanga, kakhulu Ukuxhamla yabantu baseJapan-baseMelika kunye nabasebenzi baseJapan. Okanye cinga isikhalo ngaphezulu kweT-shirt enxitywe kwiifoto zentengiso ziinkwenkwezi zefilimu Isuffragette , ndisebenzisa isilogeni esivela ku-Emmeline Pankhurst onomdla, ndingathanda ukuba ngumvukeli kunokuba likhoboka. Oku kwakunjalo iqhushumbe lokukhetha amava amnyama obukhoboka kunye nobuhlanga kunye ukungahoyi Imfazwe yamakhaya echaza abavukeli-nangona isicatshulwa singenanto yakwenza nobukhoboka baseMelika okanye imvukelo ye-Confederate kwaye wawasebenzisa omabini la magama ngengqondo yendalo iphela.
Emva koku kuqhambuka komsindo wokuzenza amalungisa kwahlukile ukuba kukho umbono othile ongalunganga esinokuthi siwubambe uSocJus. (Ukubuyela umva kwakhona kwi IngSoc ukusuka kuGeorge Orwell's Ngo-1984 Esizikithini sombono wehlabathi bububi bengcinezelo, isidima solwazi olucalucalulweyo-olusekwe kubuhlanga, ubuhlanga, isini, isini, inkolo okanye ukukhubazeka- kunye nomnqweno wokugqibelela wokuphelisa nantoni na abo babekade bejongelwa phantsi ingcinezelo okanye ukungasebenzi. Iimbono ezinjalo zinikwa ubungqongqo obusondele-ngokupheleleyo bokunyaniseka, nokuba kwabelwana ngako ngeqhezu leqela elicinezelweyo. Okwangoku, iimbono zabanelungelo-udidi olubandakanya abamhlophe abahlwempuzekileyo ngokwezoqoqosho, ngakumbi amadoda-bathotyiwe kakhulu.
Ngenxa yokuba i-SocJus ijolise kakhulu ekutshintsheni izimo zengqondo ezibi kwaye ikhupha ubuqhetseba kunye nokungakhathali, ubutshaba bayo kwintetho yasimahla kunye nokucinga ayisiyonto ilusizi yentshukumo kodwa eyona nto iphambili kuyo. Unokwamkela kwaye uhloniphe abantu be-transgender kodwa usabizwa ngokuba yi-bigot ukuba awukholelwa kwaphela ukuba abantu ababhinqileyo abachonga njengabasetyhini kodwa babe ne-anatomy yamadoda enganyaniyo ngabasetyhini bokwenyani- kwaye nokuba ulugcina ngokwakho olo luvo, kuba umceli mngeni ukungqina ukunyaniseka kwakho kumgca weqela.
Ngokucacileyo, ukuziphindezela kwizimvo ezingathandekiyo akuphelelanga kwi-SocJus, kodwa kunzima ukucinga ngelinye iqela lezopolitiko langoku elingaxoleliyo nakwizenzo ezingalunganga zomlomo. KwiKholeji yaseClaremont McKenna yaseCalifornia ekwindla ephelileyo, uDean waBafundi uMary Spellman kwafuneka rhoxa emva koqhanqalazo. Ulwaphulo-mthetho: Kwi-imeyile ephendula umfundi owayembhalele malunga nemiba yobuhlanga ekhampasini, UNks Spellman wayethethile ngomnqweno wakhe wokunceda abafundi ngcono, ngakumbi abo bangakulungeliyo ukungunda kwethu kwe-CMC, ekucingelwa ukuba babethetha abafundi ngombala don asikho esikolweni.
Kwaye alikho elinye iqela elixakeke kangaka kukucocwa kweelwimi. A ingxoxo kwiforum yezobulungisa kwezentlalo ikhuthaza ukugqobhoza kwisigama somntu amagama anamandla anjengokuphambana, isimumu kunye nokudakumba; eSmith College kunyaka ophelileyo, ingxelo yephephandaba labafundi kwiphaneli (ngokungaqhelekanga, enye inikezelwe kwintetho yasimahla) yenziwe zasendle kwaye ziyaphambana njengasendle kunye [nekhono le-slist]. Ukubiza umntu ngesilwanyana somoya efinge iintshiya phezu kuba lulwabiwo lomqondo othile kwiinkcubeko ezithile ezicinezelweyo. Uluhlu lwezifundo ze ukukhutshwa kwezinto ezincinci kubandakanya ukubuza, Uvela phi? okanye ukuncoma isiNgesi somntu ozalelwe kwelinye ilizwe.
Intetho yeSocJus- kunye nokucinga-ngamapolisa kubandakanya ukuzipolisa. Ndizilawula ngokungqongqo indlela endicinga ngayo kwaye ndizisuse kwiingcinga ezinobungozi 'ezingenakucingwa' - 'ndizibulale' ngokwam-rhoqo, wabhala umbhali wemihlathi kunye nalowo wayesakuba Ubungozi Arthur Chu ziintshatsheli 2014 Ingxoxo nge-Facebook . Yile nto kufuneka uyenze ukuze ube yinkqubela phambili yabasetyhini ngokuchasene nobuhlanga, okt. Umzekelo wamaLungelo oLuntu lwezeNtlalontle kwiTumblr.
Abanye abagcinayo bachaza iSocJus njenge inkcubeko yeMarxism ; kuye kwanjalo xa kuthelekiswa ukuya kubuMaoism, ngakumbi ku Inguquko yeNkcubeko , kugxilwe ekufundiseni kwakhona kunye nokuvuma esidlangalaleni kweempazamo zembono. Kodwa, njengeblogger engakholelwa kubukho bukaThixo uRebecca Bradley uxoxisile , intshukumo inezinto ezininzi zonqulo lwe-apocalyptic olubona umhlaba uxinene sisono nobubi ngaphandle kweqaqobana labanyuliweyo. Eyaziwayo iposti kwiTumblr, isidleke esikhulu seSocJus, uyalila , ukuhlala kwiTumblr ngalo lonke ixesha kundinika umbono onjalo okhohlisiweyo wehlabathi. Ndiqala ukukholelwa ekubeni wonke umntu uyazikhethela, unengqondo evulekileyo, unekhampasi yokuziphatha ... ukhathalele isini, ubuhlanga, ukuhlazisa umzimba, njl, kodwa ke ndiye ndiphume emnyango ndize ndiqonde ukuba wonke umntu usemgangathweni njengokuba babebabini Kwiminyaka eyadlulayo. Le yingqondo yeklasikhi yokucinga.
Kukho igama leengcinga, ezenkolo okanye ezelizwe, ezifuna ukwenza ezopolitiko kunye nokulawula zonke iinkalo zobomi bomntu: ingcinezelo. Ngokungafaniyo neenkolelo ezininzi, iSocJus ayinayo imfundiso esisigxina okanye umbono ocacileyo wobuntu. Kodwa ngandlela thile, ukwenziwa kwayo ngokungafaniyo kuyenza ibe nguzwilakhe ngakumbi. Ngelixa lonke uguquko luthambekele ekuqwengeni abantwana babo, umbutho weSocJus unokuba sesichengeni sokuzenzakalisa: Isivumo sokholo sokuphambana-ingcinezelo ephindaphindayo- kuthetha ukuba abo bacinezelweyo bahlala bephambuka ekubeni ngabacinezeli. Isikipa sakho esipholileyo sobufazi sinokuba bubundlobongela ngokobuhlanga kunqakrazo lwempuku. Kwaye ekubeni izazisi ezintsha ezazisingelwe phantsi zihlala zihlala zivela, akukho mntu unokuxela ukuba ngawaphi amagama okanye iingcinga ezamkelekileyo ezinokugxothwa ngomso.
I-Conservatives kudala ityhola ngokuchasene 'nokuchaneka kwezopolitiko'; Kodwa ngoku, nkqu nenkqubela phambili ethile ithi ubutshantliziyo obusekwe kwisazisi, ukuzilungisa nokunganyamezelani ngokuchasene nempazamo sisiphelo esibi.
Ukudibana kwenza ukuba i-SocJus ibe sesichengeni ngokukodwa kwiingxabano zangaphakathi kunye noxinzelelo. Uzihlanganisa njani iinkolelo eziqhubekayo malunga nesini kunye ne-anti-Islamophobia ephatha abakhuseli be-misogynist kunye ne-homophobic Islamist basicism njengabantu abanovelwano? Ngelishwa: KwiKholeji yeGoldsmiths, kwiDyunivesithi yaseLondon ngoDisemba ophelileyo, iqela labasetyhini kunye neqela le-LGBT ujoyine ngokubambisana kunye noMbutho wamaSilamsi, owawukhalaza ukuba intetho yasekhempasini eyenziwa ngumfazi owazalelwa eIran kunye nowayengumMuslim uMaryam Namazie yayikukwaphula indawo ekhuselekileyo.
Umbutho wezobulungisa kwezentlalo unabalandeli abaninzi abaneenjongo ezintle abafuna ukwenza umhlaba ube yindawo engcono. Kodwa uninzi lwentshukumo yalo ayingomnqweno nje wokuzingca wokuziphatha okucocekileyo. Ukulahla ubuqili kwisigama sakhe akuyi kuphucula iinkonzo zempilo okanye amathuba emisebenzi kwabo bagula ngengqondo. Ukuqhankqalaza ulwabiwo lomculo omhlophe wolwabiwo lwee-cornrows okanye umculo we-rap kuyakuba neziphumo ezi-zero kwiingxaki ezikhoyo ezijamelene nabantu base-Afrika baseMelika.
Impembelelo yeSocJus isasazeke ngaphaya kwezemfundo nakwizangqa zomzabalazo. Ubukho obomeleleyo kwihlabathi lobuchwephesha (elidumileyo indlela yokuziphatha kuluntu lwedijithali lubeka phambili ngokucacileyo ukhuseleko lwabantu abahlelelekileyo ngaphezulu kwentuthuzelo yabantu) kunye nakwiinkqubo ze-geek, ezinje nge-sci-fi kunye ne-comic-book fandoms. Ikwaseta ithoni kuninzi lwamajelo eendaba akwi-Intanethi. Kodwa ukunyuka kwayo okungakhange kuhlolwe kungaphela.
I-Conservatives kudala ityhola ngokuchasene nokuchaneka kwezopolitiko; kodwa ngoku, nangoku ezinye iinkqubela Bathetha ukuba ubutshantliziyo obusekwe kupolitiko, ukuzenza amalungisa kunye nokunganyamezelani ngokuchasene nempazamo sisiphelo esibi. Ngaphezulu, njengoko uConor Friedersdorf enayo Waxoxa phakathi IAtlantic , ukwamkelwa kwesobunxele kwezopolitiko ezichaza ubuhlanga kukhuthaze ukwanda okuothusayo kwezopolitiko ezimhlophe ekunene. Akuncedi ukuba ibala lokulwa ubuhlanga liphulukane namandla xa ubuhlanga bunokuthetha uthwele umnqwazi ngeHalloween.
Ngethamsanqa, umntu ozimeleyo, inkcubeko yenkululeko yokubuyela umva ebesela kwakhona-umzekelo ngu Ixesha le-19 elidumileyo ye iphaki yasemazantsi , eyenza iPC ibe ngumxholo ophambili. Ngubani owaziyo? Ukuba u-2015 ibingunyaka woMkhosi wezoBulungisa kwezeNtlalontle, u-2016 ingangunyaka wokuvukela okuchasayo.
Funda ezi zithuba zihambelana:
Isizathu sokwenyani ekufuneka siyeke ukuzama ukukhusela iimvakalelo zomntu wonke
Eli liLizwe eliHanjisiweyo eliDale inkcubeko
Incoko eQobayo ehlala ihleli malunga nezoSondo
Iigundane zeLebhu: Amapolisa aseMisogyny kunye neeNtatheli ezi-Sloppy zatyabeka njani iNzululwazi ePhakamileyo
Dibana noMfazi osemva 'kweyona ndoda ithiyiweyo emhlabeni'
UPhononongo lweProVen: Iipilisi zokulahleka kobunzima ezisebenzayo?
Umba ongundoqo woNyulo ukusukela oko uClinton wachaza ubuGcisa ngo-1808
Iimveliso ze-Iconic zoBuhle ekufuneka Uzizamile kube kanye
Ngaba iBill Gates ithenge ngenene iidola ezingama-645 ezigidi zeHydrogen-Fueled Superyacht?
ukukhangela simahla inombolo yefowuni
h jon benjamin jazz icwecwe
isidlo sam sangokuhlwa kunye nencwadi ye-hervé
ukuhlangabezana nabakreqayo kwiwebhu emnyama yobukrelekrele
ukuba abantu bebezingelosi, bekungekho rhulumente uya kufuneka